SABABAHA FASHALKA EE GUDAHA.
JAMICADDA CARABTA -3-
Dr. Abdi Xassan. Dhaan-Wade. Sweden.
Labadii qormo oo hore waxaan tii kawaad falanqeeyay asaaskii Jaamicadda carta 1945kii iyo ula-jeeddooyinkii loogu tala-galay oo ku wada biyo-shubayay xaqiijinta MIDNIMADA UMADDA CARBEED ee uu kala qayb-qaybiyay gumaysigii reer Eurup. Waxaan xusay in ay Jaamicadd muddadaas 60ka sano ah ay fashalba ugu guuraysay fashal kale ilaa shucuubta carabto ay ku magaabeen AQALKII FASHALKA.
Qomadii labaadna waxaan soo taxay sababiihii keenay fashalka ee kaga yimidd dibadda kuwaas oo ahaa kuwo baxsanaa awoodda dalalka xubnaha ka ah. Laakiin ay wateen duruufo iyo siyaasado caalami ah oo aysan carabi saamayn-wayn ku lahayn.
Maantana waxaan ku soo qaadayaa qormadaan sababaha fashalka gudaha ee ka yimidd dhica shucuubta iyo dawladaha Carabta. Waana tan :
1- DIBB-U�DHAC GUUD:
Waxaa ku dhacay dadyawga Carbeed dibb-u-dhac guud oo saamiya arimaha Siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshada ee dadyawga carabta guud ahaan. Waxay ka hareen Carabto hor-u-marka Aadamuhu sameeyay 200 ee sano ee la soo dhaafay. Kaas oo caalamka ka dhaliyay is-beddello qoddo-dheer oo ku yimid dhinacyada nolosh Aadamaha ee kala duwan, Carabto waxaay ka gaabiyeen in ay wax ISLAAXA ku sameeyaan nidaamkooda siyaasadeed, dhaqaale iyo Bulsho ee ay soo jireen boqolaalka sano.
Dhibaatada ugu wayn ee haysata Carabta waxay ku salaysan tahay xagga Siyaasadda iyo xukunka.
Waxaan weli xal laga gaarin SU�AASHA AH YAA XUKUMAYAA DALKA? Waana su�aal soo taaganayd lagu soo bilaabo khilaafdii raashidiinta ahaa ( RC ) ilaa waqtigaan manta ah. Waa mushkilaadd da�deedo kur u dhaaftay 14 qarni.
Dalalka Carabta waxaa xukuma Niman boqorro ah oo iyagu ku dhaqma fikradda ah in DALKA iyo DADKUba yihiin milkiyadd gaar ah oo ay iska leeyiin Boqorka iyo qowskiiso.
Waxaa soo raaca Boqoradaas Madax-waynayaal ASKAR u badan oo xoogg ku qabsady xukunka oo ku shaqeeya hab la mid ah kan boqorada oo ay ku jirto in ubadkooda ay DHAXALSIIYAAN xukanka.
Labadaas nooc ee madaxda carbeed magaca ayaa kala duwan ( BOQOR- MADAXWAYNE ) nuxura nidaamkooduna waa midd midaysan.
Shucuubta Carbeed waxay ka fogyihiin in ay wax-yar oo saamayn ah ku yeeshaan talada dalkooda. Waxayna marti ku yihiin waddamadoodii.
Su�aasha ah yaa xukunka xaq u leh? Waa mid ay dadyawga adduunku soo dhaafay qarnigii 18 aad. Waxaana lagu xalliyay in xukunka uu leeyay DAD-WAYNUHU. Waxuuna u wakiilayaan wakiillo uu soo doorto. Waa mushkiladd caalamku dhibaatadeeda ka soo gudbay waqti aan dhowayn Carabtase weli dulsaaran.
Jaamicaddu waxay kulmisaa xukuumado aan shucuubtoodii soo dooranin. Waxayna ka fikiraan oo qur ah danahooda gaarka ah iyo sidii ay KURSIGA ugu daa�imi lahaayeen kaddiban u dhaxalsiin lahaayeen wiilashood.
B- XAGGA DHAQAALAHA:
Carabta waxaa Alle ku mannaystay in ku yaallaan bartaha caalamka. Waana madiqadda ugu hodansan dunida xagga khayraadka dabiiciga iyo kan Aadamiga. Haddana waxay ka tirsansan-tahay meelaha dunida ugu FAQIIRSAN.Markii laga hadlo dhakhliga dhexdhexaaka qofka, dar-yeelka-caafimaadka, Adeega wax-barashada iyo xataa isticmaalka tvga, telefoonka iyo internetka.
Waddamada saliidda hodanka ku ah dhakhliga ka soo gala saliiddaas wuxuu gala jeebabka dad kooban oo ka tirsan qoysaska xukunka leh iyo inyar oo iyaga u adeegta. Waa dalal qani ah oo ku noolyihiin dad faqiir ah.
C- XAGGA BULSHADA :
Waxaa sugan in dalalka Carbeed inysan dhinaca bulshada ka samaynin hor-u-mar wayn. Waxaa ka jira caadaadkii gabawbay ee salka ku hayay xadaaradihii Islaamka ka horeeyay ee Paabbil iyo Persia. Kuwaas oo ay ka midd yihiin xaqiraadda hawaynka. Waxay kaga jiraan meesha ugu saraysa akhris iyo qoridd la�aanta. Iyada oo ka badan ( 80 Boqolkiiba ).
Dar-yeelka caafimaadka guud siiba kan dhallaanka iyo hooyada waa ka ugu hooseeya adduunka
Dhibaatooyinka bulsho ee carabta badankoodo waa kuwo aduunku soo dhaafay 200 sano ka hor sida xuquuqda Aadamaha, hawaynka, dhallaanka iyo tan dadka laga tiro-badanyahay.Xagga Isboortiga haddii laga eego Carabto ma soo gaaraan garoonada tartamada ee caalamka.
Dib-u-dhacaas bulsho waxay dhigeen shucuubta carabta kuwa ugu daciifan dayawga manta ku nool arlada. Taas oo Jamicaddana ka dhigtay urur daciif ah oo dad daciif ah igu yimaadeen.
2- KHILAAFAADKA DHEXDOODA AH:
Waxaa la degay Carabta khilaafaad aan dhamaad lahayn oo u dhexeeya dalalka Jaamicadda xubnaha ka ah. Khilaafkaasi wuxuu ugu daranyahay dalalka deriska ah ee xuduudaha wadaaga. Inta badan khilaafkani wuxuu sababaa culaado dhexmara xukuumadaha. Mararna wuxuu heer isku-dhacyo militari.
Waxaa la ogyahay Carabto ay yihiin kuwa ugu HUBB iibsi badan Caalamka ( 280 Milyaard oo doolar 20kii sano ee la soo dhaafay ) Waxaa taas lagu macneeya in Xukuumadd kastaa u soo iibsato hubbka si ay ugu la dagaallanto Xukuumadaha carbeed ee ay dariska yihiin. Waxaan marna qorshahooda ku jirin in hubkaas lagu ljeediyo dhinaca dalka ISRAA�IL oo ah cadawga carabta.
Khilaafaadkaas iyo colaadahaas u dhexeeya xubnaha Jaamicadda ayaa ka dhigay Ururka mid aan laga rajaynhaynin in qaado tallaabooyin wax-ku-ool ah oo lagu daaweeyo dhibaatooyinka haysta carabta. Kalalka xubnaha ah ayaan marna ku heshiinhaynin in ay Jamicadda siiyaan awood ay wax-qabadd dhab ku dhaqaaqi karto.
Waxaa taas ka sii daran in go�aannada lagu heeshyo ee tirade yar aan marna laga dhabaynin fulintoo.
Carabto waxay ku tilmaamaan go�aannnada Jaamicadda kuwo la qiimo ah warqadda iyo khadka lagu qoray.
3- MASAR OO GABTAY HOGGAAMIINTA:
Urur goboleed kastaa wuxuu leeyahay dal HOMOOD ah oo hoggaamiya. Hadduu dalkaasi hooggaaminta ku guulaysto wuxuu gaaraa ururku himilooyinkii loo dhisay. Hadduu dalkaasi curyaamiyana ururku wuu fashalaa.
Dalka Masar ayaa iska lahaa Hoggaaninta dalalka Carabta tan iyo Burburkii khilaafaddii Islaamka ee Turkiyaa 1923. Waxaa Masar dawrkaas hoggaaminta siiyay arimaha ay ka midka yihiin:
A- Iyada oo ah dalka ugu tiro-badan dad ahaan. Dadka maser wuxuu u dhigmaa 35 boqolkiiba tirade Umadda carabta. Maanta dadkeedo wuu dhaafay 70 malyuun. Waxaa kale oo ay ahaan jirtay Masar dalka ugu hodasan dalalka Carabta intii ka horaysay hilitaanka saliidda..
B- Waa dalkii ugu horeeyay ee qaata madax-baani buuxda 1923kii oo ku dhisan nidaamka casriga ah ee reer galbeedka ee ku salaysan axsaabta siyaasadda, doorasha barlamaanka iyo garsoor ka madax banaan xukuumadda iyo weliba hab wax-barasho oo casri ah oo laga soo xigtay kan caalamka.
C- Waa dalka ugu horeeya xagga aqoonta iyo farsamada warshadaynta. Taas oo ka soo billaabatay qarnigii 18 aad markii uu xukumayay Maxamed Cali Baashaa iyo duriyadiisii oo uu ugu danbeeyay Boqorkii Faaruuq 1952kii markaas oo uu Jamaal Cabdi-naasir ka taagay nidaamka jamhuuriga ah. Cilmiga Masar kuma koobna in kumaan-kun ardo carbeed ahi ay u yimaadaan tacliin balse waxaa ka hawl galay waddamada carabta boqolaal mucalliimiin oo Masaari ah oo ka hirgeliyay dalalkaas wax-barasho casri ah oo isugu jirtaa madani iyo diiniba.
D- Waxaa ka shaqeeya dalalka Carabta oo dhan kumanyaal khubaro ah oo masaari ah, Sida Dhakhaatiir, Injiyeerro, garyaqaanno, �iwm. Waaxaa kale oo ka hawl-gala malaayiin shaqaale ah oo u dhalatay Masar.
Khubaraasi iyo shaqaalahaasi waxay saamayn ballaaran ku leeyihiin siyaasadaha dalalkaas.
E- Jograafi ahaan Masar waxay ku taallo bartamaha ama wadnaha caalamka Carabta. Waxay kulmisaa Carta qorax soo baxa ( Mashriq ) ee qaarradda Asia ku yaalla iyo Carabta Qorrax-dhaca ( Magribb ) ee qaaradda Afrika ku yaalla. Waa meel iski-xirta qaarradaha Asia, Afrika iyo Europ
Intaas iyo qaar kale ayaa Masar ka dhigay hoggaamiyaha dabiiciga ah ee Carabta.
Haddaba su�aasho waa: sidee bay Masar u gudatay dawrkeeda hormuudninmada-Carbeedd??
Jawaabto su�aashani waxay u baahantahay in aan waxa-yar dibb u jalleecno taarikhda dalka Masar ee dhaw. Haddaan soo qaadanno intii ka danbaysay kacaankii luulyo 1952 dii ee uu hogaaminaya halyaygii Jamal Cabdi-naasir. Muddadaas 50sano ah Xukunka dalkaas waxuu soo maray laba marxaladood oo aad u kala duwan:
A- Maxaladdii cahdigii Cabdi-naasir.
B- Iyo maraxaladdii ka danbaysay.
A- CAHDIGII CABDI-NAASIR.
Marxaladdan oo ah 1952-1970 kii Masasar waxaa astaan u ah ssiyaasaddii la dagaallanka Isticmaarka iyo kuwa raacsanba. Masar waxay la gashay kuwaas halggan kharaar oo aan nasasho iyo waa-waani ku jirin. Nidaamkii kacaanku wuxuu isugu geeyay awooddiisii dhaqaale, militari iyo war-baahin xoraaynta dalalka la gumaysto ee carabta iyo Afrika. Siyaasadda dibaddu dalku waxay ku dhisnayd oo tiirar u ahaa:
1- Xurayta dalka Falasddiin
2- Xoraynta dalalka carabta ee ku jiray xukunka gumaystaha reer Europ.
3- Xuraynta dalalka Afrika oo badidood ku hoos noola gumaysigareer Europ.
4- Midaynta Umamadda Carbeed.
Waxay Qaahira xarun u ahayd in ka badan 30 Urur oo gobonimo-doon ah oo Afrika ah iyo ilaa 10 Urur oo Carab ah oo ka tirsan Khaliijka, koonfurta Yaman ( Cadan ) iyo waqooyiga Afrika.
Dhaq-dhaqyadaas gobonimo doonka ahi waxaa uga furaa Qaahira xafiisyo siyaasadeed oo ay ka soo saaraan bayaannada iyo wararka la xiriira halgankooda. Waxaa kale oo Ururadaas u furaa idaacado RADIO ah oo loo jeediyo dadyawga halganka ku jira.
Afrika waxaa ku wajahnaa Idacadd la yiraaho CODKA Africa (Sawtu-Ifriiqiyaa ) oo ay ka baxaan 30 luqo oo uu jiro Af-Somaligu oo leeyihiin xoriyaad-doonku.
Dalalka Carabta waxaa ku wajahnaa idaacaddii caanka ahyad ee wareerisay reer galbeedka ee la oran jiray Codka-Carabta ama: SAWTUL-CARAB.
Siyaasaddaasi waxay ku ridday Isticmaarkii naxdin iyo anfariir markii meel kasta looga kacay. Waxaa lagu qaaday dagaal militari iyo mid siyaasadeed. Waxaana la gariiray dhulkii uu ku taagnaa wuxuuna ku qasbamay in xamaantiisa ka urursado Afrika iyo carabtaba
Siyaasaddaas gumaysi la dirirka ah waxay u soo jiidday Masar culaad qoddo-dheer oo dhexmartay dawladda Masar iyo quwadaha waawayn ee reer galbeedka. Colaadahaas waxaa ka mid ahaa duullaanii seddex-geesoodka ahaa ee Masar ay ku soo qaadeen Ingiriiska, Faransiiska iyo Israa�il 1956dii.
Waxaa la maleegay shirqoollo la doonayay in lagu dilo Jamaal Cabdi-naasir. Waxaa kale oo ay reer galbeeku ku qaadeen dagaal siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid idacadeed.
Wuxuuse Cabdi-naasir kaga guulaystay xirirkii adkaa ee uu la lahaa dalalkii lagu magacaabi jiray: IS-BAHAYSIA LA DAGAALLANKA GUMAYSIGA. Kaas oo kulminayay: dalalka hant-wadaagga ah, kuwa ka xoroobay gumaysiga iyo kuwa gobonimo-u-dirarka ah. Waxaase intaas oo dhan ka waynaa taageerdii xad-dhaaf ahayd ee ay siiyeen Jamaal Cabdinaasir iyo siyaasaddiisii-shucuubta carabta dhamaantood. Kuwaas oo aan u kala harin laga bilaabo Badd-yarayda Khaliijka ilaa Badd-waynta Atlantikada,
Marxaladdaas Masar waxay ahayd dal saamayn wayn ku leh arimaha caalamka iyo mandiqadda carabta, Afrika, Asia iyo Laatiin-Amerika. Waxayna ku kasbatay siyaasaddaas Ixtiraamka iyo tixgelinta cadawgeeda iyo saaxiibkeedaba ee Galbeedka iyo Barigaba.
Saamaynta Masar kuma koobnayn Caalamka Carabta iyo Jaamicaddiisa ee oo qur balse waxay raad wayn oo lagu xisaabtamo ku lahayd Afrika, Islaamka, Asia, Laatiin-Amerika iyo Aduunka dhex-dhexaadka.
Waqtikaas Jaamicadda Carabto waxay la jaan-qaadaysay siyaasadda dalka hoggaanka u haya waxayna la hayd qiimaheeda iyo qaddarinteeda ha ahaato waddamada Carabta dhexdooda ama maxfallaada caalamiga ah.
Geeridii Jaamal Cabdinaasir kaddibb dalka Masar wuxuu galay marxaldd cusub. Waxaa ku dhacay siyaasaddiisa dibadda Is-beddel asaasi ah. Waxaa dhabarka loo jeediyay mabadi�dii iyo himilooyinkii kacaankii Liiliyo 1952dii. Taas oo aan ku soo qaaddi-doono qormada soo socota haddii Alle yiri,
Waa: Dr. Abdi Xassan. Dhaan-Wade. Sweden.
Qoraaladii hore ee Dr. Daanwade....